Sababaha Keena In La Dareemo Niyad Jab Kadib Kulanka Sariirta & Qaabka Loo Xalin Karo
HomeAqoonta SariirtaSababaha Keena In La Dareemo Niyad Jab Kadib Kulanka Sariirta & Qaabka Loo Xalin Karo
Daraasad dhawaan la soo saaray ayaa lagu ogaaday in Lamaanaha Ragga & Dumarka qaarkood dareemaan Niyad jab kadib kulanka sariirta iyada oo 46% una dhiganta in ka badan lamaane 230 ah ay dareemaan Niyad jab kadib kulanka sariirta.
Arinta la yaabka leh ayaa ah in ay niyad jabka dareemaan inkasta oo ay ku raaxaysteen waliba farxad ku jireen intii ay socotay kulanka sariirta hadaba waa maxay sababta sidee ayaana loo badali karaa.
Sababaha Keena Niyad Jabka Kadib Kulanka Sariirta:
1.Diyaar La’aanta Kulanka Sariirta:
Waxa ay u badantahay in aad ku qasbantahay in aad samayso kulanka sariirta ama aanad diyaar u ahayn jidh ahaan ama niyad ahaan iyada oo ay sidoo kale jirto sabab kale oo ah kalsooni la’aan naftaada ah ama Baqdin gudaha ah iyo dareen aad dareemayso dambi.
2.Badnida qaar ka mid ah Hoormoonada:
Waxa jirta dareeno badan oo ay maraan Ragga iyo Dumarkuba kadib marka ay dhamaato kulanka sariirta waxana uu jidhkoodu soo saaraa Hoormoono badan oo kala duwan kuwaas oo keena dareeno kala duwan sida Farxada iyo wax la mid ah laakiin sidoo kale waxa dhici karta in uu soo saaro Hoormono badan oo kugu keeni kara dareen wal-wal ah iyo farxad la,aan.
3.Muran Ka dhexeeya Lamaanaha Is Qaba:
Khabiirada ayaa ku taliya in ay lamaanayaashu xaliyaan dhibaatadooda ka dhexaysa ka hor kulanka sariirta waxana fiican in ay labada qof ee is qaba mar walba meesha ka saaraan khilaaf walba oo ka dhexeeya ka hor kulanka sariirta.
4.Sabab La Xidhiida Korintaada:
Hadii lagagu soo koriyay bulsho Aan fur-furnayn waliba wax walba laguugu sheego in ay ceebtahay xitaa marka aad qaan-gaadho waxa ay arintaas keeni karta in aad dareento farxad la,aan iyo wal-wal kadib kulanka sariirta.
Qaabka Aad U Xalin karto dhibaatadan:
Marka uu dhamaado kulanka sariirta waa in labada lamaane isaga mahad celiyaan arinta dhex martay waliba iyaga oo isku sheegaya sida ay raaliga uga yihiin qaabkii ay wax u dheceen.
Kadib kulanka sariirta isku day in aad jidhkaaga nasiso oo aad qaadato Hurdo yar oo kugu filan.
Ha isku dayina in aad markaaba u kacdaan dhamaysiga shaqadaada ama in aad wax Akhrisato hadii aad Wax barato.
Cunto wada Cuna kadib kulanka sariirta taas oo kor u qaadaysa farxadiina.
Wadooyin Cajiib Ah Oo Aad Dib Ugu Cusboonaysiin Kartaan Jacaylkiina
Arimaha Lagu Garto In Uu Ninku Si Dhab Ah U Jecelyahay Gacalisadiisa.